Rava ny mpitantana amerikanina ... | Martech Zone
Rava ny mpitantana amerikana…
Alakamisy Oktobra Oktobra 20, 2005 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Douglas Karr
Voababo ny mpitantana amerikana. Ny sasany aza dia brat.
Alao an-tsaina ny fitantanana amin'ny nosy. Ny nosy misy anao dia voafetra ny fananan'olombelona, ​​lavitra ny toerana rehetra ary fiteny hafa no nitenenanao. Ny fisarihana mpiasa any amin'ny nosinao dia sarotra noho ny fitenin-drazany sy ny nosy. Tsy eo atsinanana na Karaiba ilay nosy, mangatsiaka sy mando ary amam-bolana vitsivitsy monja. Lehibe, ny mpiasanao dia nampianarina hiteny fiteny hafa roa hafa satria tsy dia fantatra loatra ivelan'ny nosy misy anao ny fiteninao.
Amin'ny maha mpitantana sy mpikambana ao amin'ny nosy anao dia anjaranao ny mamindra ny mpiasanao amin'ny toerana ahombiazany. Mila miasa mafy ianao mitazona ny mpiasa; satria, na tranony aza izy ireo dia afaka mandao ny nosy isaky ny te-hanararaotra fotoana hafa izy ireo. Tsy maintsy mampiasa vola be amin'ny mpiasao ianao na amin'ny karama na amin'ny enti-miasa. Ny mpiasa tsirairay dia manomboka amin'ny 5 herinandro fialan-tsasatra isan-taona. Mety tsy ho afaka hampiroborobo haingana ny olona ianao satria mety handevina ny orinasanao ny fihodinanan'ny mpiasa sy ny lolom-po.
Islandy ilay nosy. Ny tanàna dia Reykjavik. Firenena mahavariana izy io. Manankarena kolontsaina, tantara ary manana ny kolontsaina mahasalama sy manankarena indrindra eran-tany ny olony. Ny jono sy ny fizahan-tany no indostria voalohany eto Islandy. Manana ny hazan-dranomasina tsara indrindra eran-tany izy ireo. Ilay nosy dia manankarena amin'ny endrika ara-jeografika mahavariana manomboka amin'ny glaciers, geysers, hatrany amin'ny lava.
Ny orinasako dia nandefa ahy tany Islandy tamin'ity herinandro ity mba hanampy ny iray amin'ireo mpanjifanay. Hatramin'ny fotoana nijanonantsika, dia talanjona izahay. Ny kolontsain'ny fikambanana, ny matihanina ary ny fanoloran-tenan'ny mpiasa dia tsy nitovy tamin'ny orinasa amerikana niara-niasa tamiko. Ny zava-misy dia heveriko fa simba isika.
Any Amerika, raha tsy tianao ny mpiasanao dia azonao atao ny mandroaka azy ireo fotsiny, angataho izy ireo hiala, na ataovy tsy mahazo aina izany rehefa lasa izy ireo. Raha tsy mamokatra izy ireo, dia tsy mila mampihatra loharanom-baovao ianao, mandraisa vaovao. Ny famokarana eto amin'ity firenena ity dia malaza manerantany fa tsy noho ny mpitantana lehibe antsika. Izany dia noho ny harena lehibe ananan'olombelona ananantsika. Midika izany fa tsy mila mitantana isika. Tsy mila mitarika isika. Izahay dia tsy mihevitra ny faharetan'ny orinasa ho toy ny fananana matetika arakaraka ny faharetan'ny mpiasa amin'ny orinasa iray; lasibatray izy ireo noho ny fahalemeny.
Ny mpanjifa notsidihinay dia orinasa mahasoa amin'ny indostria iraisam-pirenena izay mipaka hatrany amin'ny toerana rehetra. Miatrika fanamby betsaka noho izy ireo izy ireo. Raha ny tena izy, ny mpifaninana aminy eto amintsika dia mety bankirompitra ao anatin'ny drafi-pandraharahana stratejika! Mifantoka amin'ny kalitao izy ireo, fa ny mpifaninana aminy kosa mifantoka amin'ny vidiny. Manana paikady maharitra izy ireo, raha manahy ny amin'ny vidin'ny tahiry ankehitriny kosa ireo mpifaninana aminy. Mitaky izany ny fiveloman'izy ireo ary afaka izy ireo.
Amin'ny lafiny rehetra, ny kolontsain'izy ireo sy ny fahasarotan'ny tontolo iainany dia mitaky ny hahatonga azy ireo ho mpivarotra tsara kokoa, olona mpandraharaha tsara kokoa, ary indrindra indrindra, mpitantana tsara kokoa. Rehefa nipetraka tamin'ny fivorianay niaraka tamin'ny mpiasa am-polony izahay, dia tsy azonay fantarina hoe iza no lohalaharana ary iza no mpitantana ambony - izy rehetra dia manam-pahalalana, be fanoloran-tena, be feo ary mirotsaka.
Tamin'ny asako dia nihaona amina mpitantana 1 na 2 aho izay mety afaka hifaninana amin'ity tontolo ity. Mampalahelo fa ireo olona an'arivony niara-niasa tamiko dia tsy manana labozia. Raha ny marina dia heveriko fa iray amin'ireo farany aho…. Tsy azoko antoka hoe hahomby eo koa aho.
Simba ny mpitantana anay. Tsy mila mitantana izy ireo, tsy mila mizatra amin'ny tontolo iainany fa nanova ny tontolo iainana fotsiny mba hanarontsaronana ny tsy fahafahany mitarika. Amin'ny orinasa sasany, tombony ho an'ny mpiasa mihitsy aza ny fivezivezena ataon'ny mpiasa satria mahavita mandoa vola hatrany izy io. Ny sasany mino fa mora kokoa ny mahazo mpiasa vaovao noho ny mitandrina za-draharaha.
Nathan Myhrvold, Chief Scientist teo aloha, tao amin'ny Microsoft dia nilaza hoe, ?? Ireo mpamorona rindrambaiko ambony dia mamokatra kokoa noho ny mpamorona rindrambaiko antonony tsy amin'ny 10X na 100X, na 1,000X akory, fa 10,000X.â ??? Azoko antoka fa azo averina manerana ny ankamaroan'ny fikambanana io fanambarana io. Ny tena izy dia - tsy mendrika ny mpiasa tsara Bebe kokoa noho ny mpiasa hafa dia mendrika izy ireo mitombo bebe kokoa.
Rehefa mitohy ny fampidirana ny tontolontsika dia mihakely ny nosintsika. Tonga mpanjifa amin'ny tsena manerantany i Amerika izao ary tsy hahomby isika raha tsy ampamoahinay ny mpitantana anay. Ny zavatra takian'i Islandy hanaovana dia tsy dia lavitra loatra amin'ny hoavintsika. Ny mpiasa sy mpitantana tsara anay dia hoentin'ny orinasa manome lanja ny lanjany. Mpitantana ratsy no hitondra ny orinasany ratsy amin'ny tany.
Tags: amerikamaneran-ny toe-karena maneran-Islandyiraisam-pirenenafitantananampitantanaizao tontolo izao